गर्मीमा मनाइने क्रिसमसको मज्जा लिन अष्ट्रेलिया जाने कि ? - Himalayan Kangaroo
गर्मीमा मनाइने क्रिसमसको मज्जा लिन अष्ट्रेलिया जाने कि ?
Posted by Himalayan Kangaroo | ७ पुष २०७३, बिहीबार ०४:४६ |
मेलबर्न । विश्वव्यापीकरणसँगै नेपालीहरु नपुगेको देश र उनीहरुरले थाहा नपाएका संस्कृतिहरु कमै होलान् । अझ क्रिसमस जस्तो विश्वका सबै मुलुकमा धुमधामले मनाउने पर्वबारे त नेपालीहरु निकै पहिलेदेखि नै अभ्यस्त छन् । कतिसम्म भने नेपालीहरुले क्रिसमसलाई पनि नेपाली पर्वकै रुपमा भव्यतापूर्वक मनाउन थालिसकेका छन् । चाडपर्वको निहूँमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा घुम्न जाने अर्को संस्कृतिको समेत विकास हुँदैछ नेपाली समाजमा । तर क्रिसमसको अवसरमा विदेशमा कहाँ जाने ? भन्ने द्धिविधामा हुनेहरु पनि होलान् ।
क्रिसमस हिउँदमा पर्छ । अर्थात जाडो महिनामा पर्छ क्रिसमस पर्व । तर जाडो महिनामा पर्ने यो पर्वलाई गर्मी मौसममा मनाउन पाए कस्तो हुँदो हो ? धेरैले कल्पना गरेको कुरा हुनसक्छ यो । तर अष्ट्रेलियामा जानुभयो भने यो कल्पना होइन यथार्थ बन्न सक्छ । किनभने अष्ट्रेलिया एउटा छुट्टै महादेश हो र अहिले यहाँ समर सिजन अर्थात गर्मी मौसम चलिरहेको छ । काठमाडौं वा नेपालमा जाडोले अच्छ्यु अच्छ्यु गर्दै कपडाहरुको पत्रैपत्र शरीरमा बेरेर क्रिसमस मनाउँनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भई स्वच्छन्द तरिकाले सर्ररर वतासको झोंका वा समुद्री किनारामा छालहरु हेर्दै क्रिसमसको रमाइलो लुट्नु छ भने अष्ट्रेलिया सबैभन्दा उपर्युक्त गन्तव्य बन्नेमा कुनै शंका छैन ।
यही कुरालाई मनन गर्दै एस ट्राभल्स काठमाडौंले अष्ट्रेलियामा क्रिसमस मनाउन जान चाहनेका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याएको छ । सात रात र आठ दिनको उक्त प्याकेज अन्तर्गत अष्ट्रेलियाका चर्चित शहरहरु सिड्नी,क्यानबेरा अथवा मेलबर्नमध्ये कुनै एकलाई चुन्न सकिनेछ । यसका लागि प्रति व्यक्ति २ लाख ९६ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यो शुल्कमा भिसा शुल्क,दुईतर्फी हवाई भाडा,होटलमा बस्ने सुविधा,खाना,ब्रेकफास्ट र साइटसिइङ लगायतका प्याकेजहरु उपलब्ध हुने जनाएको छ ।
Previousसंसदको बैठक आज बस्दै,चल्न नदिने एमालेको अडान यथावत
Nextअष्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित सरकारी कार्यालयमा कार वम विस्फोट
आकर्षण बटुल्दै अष्ट्रेलियामा स्नातक तहमा ‘फोटोग्राफी’ कोर्स
१२ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार ०२:५४
७ फाल्गुन २०७३, शनिबार ०४:३४
अष्ट्रेलियामा स्नातक तहमा सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग कोर्स
१ असार २०७४, बिहीबार ०४:०१